Andro Erantany ho an’ny Ranomasimbe, an-tsary avy any Trinidad sy Tobago · Global Voices teny Malagasy
Olan'ny toetrandro, misy fiantraikany amin'ny fahasalamana sy ny fahelan'ny ranomasimbentsika
Voadika ny 16 Jona 2022 12:27 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Română , srpski, Español, Italiano, Shqip, English
Mody masoandro eo amin'ny ranomasimben'i Karaiba, ‘Down de Islands,’ Trinidad. Sary an'i Janine Mendes-Franco, nampiasaina nahazoana alalàna.
Ny Andro Erantany ho an'ny Ranomasimbe, notendren’ny Firenena Mikambana (ONU) tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2008 ary ankalazaina isantaona isaky ny 8 Jona, dia mikendry ny hanairana ny sain'izao tontolo izao amin'ny maha-zava-dehibe ny ranomasina amin'ny fiainana anaty ranomasina sy ny olombelona, ka hiezaka ny hiaro azy ireo bebe kokoa ao anatin'ny rafitry ny Tanjona Fampandrosoana Maharitra an'ny Firenena Mikambana (SDGs / ODD).
Ny tanjona faha-14 dia mifantoka amin'ny fiarovana sy ny fampiasana maharitra ny ranomasimbe ananantsika, ny ranomasintsika ary ny harena an-dranomasina, satria [mitantana] rafitra manerantany izy ireo izay mahatonga ny tany ho azo onenan'ny olombelona”:
Ny ranon'orantsika, ny rano fisotrontsika, ny toetrandrontsika, ny toetanintsika, ny morontsiraka antsika, ny ampahany betsaka amin'ny sakafontsika ary na dia ny rivotra fohantsika aza, dia avy amin'ny ranomasina daholo ary izy no mandrindra azy.
Asehon'ity SDG manan-danja ity ny zava-misy hoe ny ampahany betsaka amin'ny tany dia rano avokoa ; tsy ho tafavoaka velona ny olombelona raha tsisy azy. Manamarina indrindra izany ny any amin'ireo Nosy Madinika Andalam-pandrosoana (PEID) toa an'i Karaiba izay, tena matetika, voalohany voakitiky ny fikorontanan'ny toetrandro, toy ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina, ny vanimpotoanan'ny rivodoza mahery vaika isantaona any Atlantika, ny fihafotsian'ireo haran-dranomasina, fahalotoan'ny rano amorontsiraka, ny fanjonoana tafahoatra ary ny fiakaran'ny hafanan'ny ranomasina izay mitarika ny fitomboan'ireo ahindrano be loatra. Misy fiantraikany ratsy ihany koa eo amin'ny fanjonoana ao Karaiba ny tsy fifandanjana ara-tontolo iainana tahaka izany, raha toa vao mainka mampitombo ny olana ny governemantam-paritra sasany manao sorona ny tontolo iainana marefo amin'ny morontsiraka mba hahazoana tombony ara-toekarena.
Ireo mpikatroka mafàna fo sy ireo mpitarika mpiaro ny tontolo iainana eo an-toerana dia mahalala tsara ireo fanamby, saingy angamba amin'ity taona ity, Andro Manerantany ho an'ny Ranomasimbe, izay ny tanjona dia ny fanomezana aina indray ireo ranomasimbe antsika, dia ilaintsika ny mahatsiaro ny tanjon'izy ireny sy ny hatsaran'izy ireny, mialoha ny tena hahafantarantsika marina ny maha-zava-dehibe ny asa iombonana takiana mba hiarovana azy ireo am-pahombiazana.
Ireo ranomasimbe manodidina ny repoblikan'ny Nosy kambana ao Trinidad sy Tobago, any atsimon'ny vondronosy Karaiba, no ohatra iray tonga lafatra amin'ny fomba rehetra maha-manan-danja ny ranomasina – sady zava-dehibe – ho an'ny tena fisiantsika mihitsy.
Ranomasimbe Atlantika mifanena amin'ny ranomasimbe Karaiba. Sary an'i Janine Mendes-Franco, nampiasaina nahazoana alalàna.
Ny teboka, eo amin'ny sisintany avaratra-atsinanan'i Trinidad, eo amin'ny toerana misy ny fanilon'i Toco, izay ny rano mafana ao amin'ny ranomasina Karaiba mifanena amin'ny loko manga lalin'ny ranomasina Atlantika, dia tsiahy iray mampihetsi-po hoe mifandray avokoa ireo ranomasimbe rehetra eran'izao tontolo izao, tahaka ny maha-olombelona ihany.
Ny Torapasik'i Paramin, manaraka ny morontsiraka avaratr'i Trinidad dia toeram-panjonoana malaza. Sary an'i Janine Mendes-Franco, fampiasàna nahazoana alalàna.
Fanintonana iray lehibe ho an'ireo mpanjono ny morontsiraka avaratr'i Trinidad. Matetika mifanandrina amin'ny trondro goavana ‘tarpon’ ireo izay manao izany ho fanatanjahantena, fa maka ny zava-drehetra kosa, Kingfish hatramin'ny Mahi-Mahi, ireo izay manao izany ho fidiram-bolany. Ity toerana manokana ity, izay tongan'ny sambo, na amin'ny alalan'ny tehezan-kavoana mideza midina ao an-tanànan'i Paramin, dia matetika toerana ankifizin'ireo mpanjono, miaka-danja noho ny fiasian'ny sarivongan'i St. Peter, olo-masina mpiaro ny mpanjono, najoro eo ambony fasika.
Manaraka ny fihodin'ny fanjaitram-pamantaranora, avy eny ambony ankavia : Torapasika Damien ao amin'ny Blanchisseuse; Toco, manaraka ny morontsiraka avaratra-atsinanan'i Trinidad, ary ny fitazanana ny ranomasimbe manomboka eo Chaguaramas avaratra-andrefana. Sary an'i Janine Mendes-Franco, fampiasàna nahazoana alalàna.
Mitàna anjara toerana lehibe ho an'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina ireo ranomasimbe. Rehefa nakatona nandritra ny volana maromaro ny torapasik'i Trinidad sy Tobago noho ny teritery nateraky ny COVID-19 tao amin'ny firenena, dia marobe ireo fanangonan-tsonia nangataka mba hanokafana indray azy ireo hahafahan'ireo mpanao “surf” hanao fanatajahantena, mba ho afaka hitondra ireo zanany any ivelany ireo mponina izay mipetraka amin'ireo vohitra manamorona ny ranomasina (toa an'i Toco, eo amin'ny morontsiraka avaratra-atsinanana), ary mba ho afaka mifandray amin'ny natiora ireo mpandeha an-tongotra (toy ireo izay mananika amim-pinoana ny lalankelin'i Tracking Station ao Chaguaramas, ao avaratra-andrefan'ny Nosy), izay voaporofo fa loharanon'ny fakàna aina sy famelomana indray.
Morontsirak'i Grande Rivière manaraka ny sisiny avaratra-atsinanan'i Trinidad. Sary an'i Janine Mendes-Franco, fampiasàna nahazoana alalàna.
Eo amin'ny maherin'ny iray kilometatra ny halavany, ny Grande Rivière dia iray amin'ireo toerana fanorenana akany fanatodizana tena iroboroboan'ireo sokatra valozoro ao amin'ny firenena. Ny tanàna manodidina, izay mahafantatra tsara ny fisian'ny fifandraisana akaiky amin'ny tontolo iainana sy ny fitadiavany fivelomana amin'ny fomba fanao maharitra, dia miezaka araka izay azony ataony tsy hanisy fiantraikany loatra amin'ny tontolo iainana, ary manana vondrom-piarahamonina ara-dalàna mazoto miambina ny torapasika mba hiarovana ireo sokatra sy hampianatra ireo mpitsidika tonga any hijery azy ireo mandritra ny vanim-potoanan'ny fanorenany akany, manomboka ny volana Martsa ka hatramin'ny volana Aogositra isan-taona.
Ilay toerana izay ihaonan'ny renirano Nariva amin'ny ranomasimbe Atlantika eo Manzanilla-Trinidad manaraka ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy. Sary an'i Janine Mendes-Franco, fampiasàna nahazoana alalàna.
Ity faritra saropady ara-tontolo iainana ity, izay manaraka ny sisin'ny morontsiraka atsinanana mahafinaritra ao Trinidad no misy ny Nariva Swamp, ilay faritra mandon'ny ranomamy midadasika indrindra ao amin'ny firenena, voatondro ho Faritra Mando Manan-danja Iraisam-pirenena araka ny fifanarahana Ramsar, sy ny Bush Bush Wildlife Sanctuary, manankarena indrindra amin'ny harena voajanahary, ahitàna karazam-biby maherin'ny 200, toy ny vorona, ny biby mandady sy ireo biby mampinono.
Manaraka fihodin'ny famantaranora avy any ankavia : trondro iray nojonoina tao “Down de islands” ; fitaingenana sambo fialamboly ao amin'ny Nosy Gaspar Grande; onjan-drano miantefa amin'ny fefilohan'ny trano a-nosy iray; feso iray manaraka ny sambo amin'ny mody masoandro. Sary an'i Janine Mendes-Franco, fampiasàna nahazoana alalàna.
Ahitàna trano fivahinianana marobe ao amin'ny vondron'ireo nosy madinika izay mameno amin'ny morontsiraka avaratra-andrefan'i Trinidad, ahafahan'ireo olona manjono, miantsambo ary mifankahalàla (izay antsoin'ireo Trinbagoniana hoe “sokay”). Tsy mahazatra ny mahita ireo feso, ireo soka-dranomasina ary trozona tonga tsindraindray any anaty rano lalina manodidina ireo Nosy.
Toerana milamina ao amin'ny Torapasika Mount Irvine, Tobago. Sary an'i Janine Mendes-Franco, fampiasàna nahazoana alalàna.
Koa satria hita ao amin'ny vavaranon'i Renirano Prinoco ao Venezoela i Trinidad, ireo rano manodidina ny Nosy dia tsy mifanaraka amin'ny fitsaràna ny lokon'ny ranomasimbe ao Karaiba ho manga manopy maitso ; Tobago, etsy andaniny, dia sarin-karatra fandefa paositra tena tonga lafatra ary miankina amin'ny fizahantany ny ampahany betsaka amin'ny toekareny, na iraisam-pirenena io na nasionaly.
Faritra manodidina isan-karazany ao amin'ny Petit Trou Lagoon. Sary an'i Janine Mendes-Franco, fampiasàna nahazoana alalàna.
Petit Trou Lagoon, hita ao amin'ny faritry ny tany lemaka amin'ny ilany atsimo sy vava rivotra ao Tobago, mahazo tombony amin'ny fifangaroan'ny rano masira sy ny rano matsabok'ilay kamory voahodidina honko. Navadika ho toeram-pialan-tsasatra ireo toerana manodidina, misy an'ireo trano ‘villas’, trano fialan-tsasatra lehibe kokoa sy kianja filalaovana golf, ary na teo aza ny adihevitra voalohany ho famadihana ilay farihy ho seranana, dia tavela amin'ny endriny taloha ihany izy, misy fiantraikany kely amin'ny fampandrosoana ny rafi-piainana manodidina azy. Mahasarika an'ireo mpanao ‘kayak’ sy ireo mpivoy lakana ilay kamory, izay ny ankabeazany dia ireo mpankafia ny zavaboahary mahafinaritra sy ireo karazam-borona.
Fahafinaretana ny mitsidika ireo lalankely izay hita mampitohy ireo tambajotrana ala honko, na dia hita tamin'ny tatitra tamin'ny 2021 aza fa ny faritra misy ireo ala honko ireo dia niharan'ny toe-javatra iray fantatra amin'ny anarana hoe “dieback”, aretina mpahazo ny zavamaniry manan-taho misy tsilo ka mahafaty miandalana ny rantsany, ny sampany, ny solofony na ny fakany, manomboka eny amin'ireo tendrony – azo heverina ho avy amin'ny fitobahana sy fifotetahan'ny ‘sargassum‘ tafahoatra isantaona. Tena manahirana izany, satria fampifandraisana manandanja be tena ilaina eo amin'ny rafi-piainana an-dranomasina sy an-tanety ireo ala honko ireo, toy ireo faritra anirian'ny ahi-dranomasina sy ny haran-dranomasina.
Tsy hisalasalana fa ny krizin'ny toetrandro dia miantraika amin'ny fahasalamana sy ny faharetan'ireo ranomasimbe antsika. Aorian'ny COP-26, raha tsy manana fandavantena ireo governemanta hampihatra ny “1,5 mba hitohy ho velona”, dia tsy hitsahatra hisy fiantraikany eo amin'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka hatrany ny fiakaran'ny ranomasina, hisy hatrany ny fitohizan'ny maha-asidra loatra ny ranontsika, ary hitohy halazo hatrany ireo haran-dranomasina Karaiba sy ireo ala honko. Mba hanana fanantenana kely hamerenana ho tahàka ny taloha ny endriny sy ny fiasany, ilaina ny hetsika iombonana, tsy ho an'ny faharetana fotsiny ihany fa ho an'ny fahavelomana ihany koa.
Jamaika 15 Mey 2022